युगसम्बाद साप्ताहिक - असोज तीन गते ‘कु’ हुने थियो ?
असोज तीन गते ‘कु’ हुने थियो ?
Wednesday, 04.27.2016, 11:57am (GMT+5.5)
काठमाडौं । संविधान जारी नगर्न भारतले ठूलो दवाव दिएको थियो । सबैलाई समेटेर सबैको सहमतिमा मात्र संविधान जारी गर्नुपर्ने भन्दै नेपालमा रहेका कूटनीतिक नियोगले पनि दवाव दिइहेका थिए । भारतबाट विदेश सचिव नै आएर केही दिन संविधान जारी गर्न रोक्न दवाव दियो । तर, तत्कालीनन सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले कुनै हालतमा संविधान जारी गरे । अहिले त्यो सही थियो कि गलत भन्ने प्रश्न–उत्तरको विषय बनेको छ ।
नेपालको संविधान रोक्न कहाँबाट के कस्ता खेल भएका रहेछन् भन्ने वैशाख १० गते पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा महत्वपूर्ण दिन सावित भएको २०७२ असोज ३ गते ‘कु’ हुन लागेको खुलासा गरेपछि नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ । यो तरंगले नेपालका राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा नउभिए प्राप्त उपलब्धि कुनै पनि बेला गुम्नसक्ने खतरा मडारिएको पनि देखाएको छ ।
पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आफूले अडान नलिएका भए संविधान पनि जारी नहुने र ’कु’ सक्ने सम्भावना औंल्याइदिएपछि त्यो कु कोबाट हुन लागेको थियो भन्ने प्रश्न उठेको छ । पूर्वराष्ट्रपति यादवले संविधान प्रक्रियामा आफूलाई धेरै चित्त नबुझे बताउँदै त्यसबेला राष्ट्रिय सहमति नभई राजनीतिक सहमतिले मात्र संविधान बनेको र त्यस्तो अवस्थामा आफू बाहेक अन्य कोही पदमा भएको भए २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले जस्तै ‘कु’ गर्नसक्ने अवस्था रहेको बताउनुभएको थियो ।
जारी संविधानमा भारतको समर्थन छैन । उसले व्यापक असन्तुष्टि जनाइरहेको छ । संविधान जारी भएपछि भड्किएको मधेश आन्देलनले नाकाबन्दीसम्मको अवस्था सिर्जना गरेको छ । मधेशवादीहरूले शुक्रबार मात्रै नयाँ चरणको आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । अहिले खुसाला गरिएको कथन प्रचारवाजी मात्रै हो कि सही हो भन्ने गम्भीर विश्लेषणको विषय बनेको छ । संविधानमाथिको विवाद र बहस जारी रहेका बेला पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आफूबाहेक अरू कोही राष्ट्रपति भएको भए संविधान जारी हुने दिन ’कु’ भैसक्ने खुलासा गर्नुको संकेत कतातिर थियो ? स्पष्टै छ– पूर्व राष्ट्रपतिको संकेत भारततिरै थियो । भारतले संविधान जारी गर्न केही दिन रोक्ने मनसायले नै विदेशसचिव पठाएको थियो । तर नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले त्यो कुरा मानेनन् । उनीहरूले सविधान जारी गरे । फलतः भारतको नाकाबन्दी मलुकले भोग्नुपर्यो ।
नेपालमा संविधानन जारी हुन लागेकोमा एउटा समूह बाहेक अरू बेखुस थिएन । मधेशवादीहरू भारतकै आड भरोसामा आन्दोलन गर्दैथिए । भारतले संविधान जारी नगर्न ठूलो दवाव दिइरहेको थिया र तत्कालीन राष्ट्रपति डा. यादवलाई पनि दवाव दिएको उहाँकै कथनले खुलस्त भएको छ । लोकतन्त्र प्राप्तिपछि वैदेशिक शक्तिको खेल मैदान बनेको नेपालको राजनीतिक र परिवर्तित सन्दर्भका एजेण्डाहरू विदेशीले तय गरिदिंदा अहिलेको समस्याको समाधानको बाटो नै पहिलिन नसकेको हो । मधेशवादीको माग सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन भैसक्यो । तर, उनीहरू आन्दोलनमै छन् । आदिवासी, जनजाति पनि संविधानले आफूहरूलाई अधिकार नदिएको भन्दै असन्तुष्ट छन् ।
यी सब मुद्दाहरू विदेशीको लगानीको फल हो भन्नेमा कुनै विमती छैन । अहिले आत्मनिर्णयको अधिकार सहितका जातीय राज्यको मुद्दा हरायो । किन ? यो माग नेपालीको छँदै थिएन । जातीय अधिकारका नाममा विद्वेष सिर्जना गर्ने र धर्म परिवर्तनको बाटो खुला पार्ने षड्यन्त्र थियो त्यो । त्यसका लागि करोडौं रूपैयाँ लगानी भएको छ । संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेखाउन मात्र हैन संविधानमै धर्म परिवर्तनलाई मौलिक हकमा राख्न पश्चिमा शक्तिले दवाव दिएको खुलेकै हो । उता भारतले मधेश प्रदेशका विषय आफूले भनेजस्तो हुनुपर्ने मान्यतामा थियो । एक मधेश एक प्रदेशको अडानमा रहेकाहरू विस्तारै परिवर्तित हुँदैगर्दा प्रदेशहरूको सिमांकनमा आएर भारत आक्रोशित भयो र नाकाबन्दी लगायो ।
तर, असोज ३ गते संविधान जारी हुनबाट रोक्न उसले राष्ट्रपतिदेखि सम्बन्धित सबै निकायमा चलखल गरेको र त्यो सम्भव नहुने देखेपछि ‘कु’ नै गराउने षड्यन्त्र गरेको खुलासा तत्कालीन राष्ट्रप्रमुख तथा नेपाली सेनाका परमाधिपतिबाट हुनु नेपाल अझै पनि विदेशीको गिद्देदृष्टिमै रहेको स्पष्ट भएको छ । डा. यादवको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएलगत्तै फास्ट ट्रयाकबाट संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्दै अडान राख्नुभएका प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको कथन यतिबेला सही सावित भएको दवी गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसबेला संविधान जारी गर्नैपर्छ भन्ने आफूहरूको अडान कति महत्वको रहेछ भन्ने अहिले पुष्टि भएको बताउनुभयो । के त्यसो भए ‘कु’ गर्न खोजिएको थियो त ? राष्ट्रपतिलाई कसले दवाव दिएको थियो ? त्यो शक्ति स्वदेशी थियो कि विदेशी ? यो भने कुतुहलताको विषय छ ।
संविधान जारी भएको सात महिना पूरा भएको छ । अझै यसको कार्यान्वयनमा जटिलता छ । त्यो जटिलता चिर्न सबैको साथ र सहयोग आवश्यक भए पनि अहिले सत्ता प्राप्तिको खेल सुरू भैसकेकाले कतै यस्तो कथन सत्त टिकाउने र गिराउने खेल मात्र त हैन भन्ने प्रश्न पनि उठाउन सकिन्छ । तर, सत्य कुरा के हो भने नेपालको सत्ता राजनीतिमा विदेशीको चरम चासो र हस्तक्षेप बढिरहेका बेला उनीहरूको स्वार्थ पूरा नहुने स्थिति उत्पन्न हुनासाथ अनेक हथकण्डा अपनाउने गरेको कुरा भने जगजाहेर हो ।